Habka NASA ee lagula dagaallamayo Duufaantii Gobally |
Jebinta Wararka Safarka • Arimaha Dowlada • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • Wararka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Tiknoolajiyadda Safarka • Warka Safarka Safarka • USA News
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka USA » Habka NASA ee lagula dagaallamayo Duufaanta Gobally
NASA waxay la midowday Jaamacada Michigan la dagaalanka Cyclones.
Mashruuca loogu magac daray CYGNSS wuxuu ahaa howl bilow ah.
Wakaaladda Hawada Mareykanka ee NASA ayaa qandaraas siisay Jaamacadda Michigan oo loogu talagay Dayax-gacmeedka Dayax-gacmeedka Caalamiga ah ee Dayax-gacmeedka (CYGNSS) oo loogu talagalay howlaha howlgalka iyo xirista.
Iyada oo xiddig sideed microsatellites ah, nidaamku wuxuu arki karaa duufaanada si isdaba joog ah iyo hab dayax gacmeedyada dhaqanka aysan awood u lahayn, kordhinta awooda saynisyahannada ee ah inay fahmaan oo saadaaliyaan duufaannada.
Wadarta qiimaha qandaraaska waa ku dhowaad $ 39 milyan. Xarunta Hawlgallada Sayniska ee CYGNSS waxay ku taal Jaamacadda Michigan.
Muddo tobanaan sano ah, NASA waxay door hoggaamineed ka ciyaartay adeegsiga dayax gacmeedyada Dunida kormeeraya si ay u ururiyaan xogta loo baahan yahay si loogu quudiyo moodooyinka saadaasha hawada. CYGNSS waxay sii wadaa shaqadaas, iyadoo adeegsanaysa farsamo dareen durugsan oo loo yaqaan "GPS firidhsan firidh" si loo arko iyadoo loo marayo roob culus si loo qiyaaso xoogga dabaysha dusha sare ee xudunta u ah duufaannada.
"CYGNSS waxay ahayd howl horumarsan oo na siisay aragti cusub oo ku saabsan firfircoonida duufaanada kuleylka ee si xowliga ah u xoogeysanaya," ayay tiri Karen St. Germain, oo ah agaasimaha waaxda sayniska dhulka ee NASA. "CYGNSS sidoo kale waa aalad awood u leh ogaanshaha daadadka dhulka iyo badda ogaanshaha qashinka microplastic - taasi waa nooca qiimaha lagu daray ee aan jecelnahay inaan aragno, waxayna wadada u xaareysaa cilmi dheeri ah oo yeelan doona faa'iidooyin bulsheed oo muhiim ah."
Qiyaasaha ka imanaya CYGNSS waxay faa'iido u leeyihiin cilmi baarista ku saabsan horumarinta algorithm, falanqaynta si ay uga caawiso dadaallada tusaalooyinka mustaqbalka, iyo daraasadaha hannaanka nidaamka dhulka.
Hawlgallada dheeraadka ah waxay awood u siinayaan cilmi-baaris cusub oo fiirineysa kala-duwanaanta cimilada muddada-dheer waxayna kordhin doontaa cabirka tusaalaha dhacdooyinka ba'an ee ka caawin kara qaabeynta iyo saadaalinta. Dayax gacmeedyada CYGNSS waxay sii wadaan qaadashada 24/7 cabbiraadaha dabaylaha dusha sare, adduunweynaha iyo duufaanada kulaylaha, kuwaas oo loo isticmaali karo in lagu barto geeddi-socodka saadaasha hawada iyo hagaajinta saadaasha hawada ee tirada. Dhinaca dhulka, dayax gacmeedyadu waxay qaadaan cabbiro isdaba joog ah oo daadadka iyo qoyaanka ciidda ah ee loo isticmaalo daraasadaha hannaanka biyo-biyoodka iyo la socodka masiibada.